Isongo kunye neBangle
Umzimveliso woKhenketho kunye neMiboniso
KUTHENI UKHETHA i-danymia JEWELRY
ngu admin nge-20-06-08
Yiwu danymia Jewelle Factory, igxile kwimveliso, ekuphuhliseni nasekuyileni zonke iintlobo zeentamo zefashoni, amacici, namasongo, amakhonkco kunye nezinye iiseti zee jewelry. Singomnye wabenzi bezinto zokuhombisa eziphezulu abathengisa ngokuthe ngqo kubathengisi abathengisayo kunye nabathengisi kwihlabathi liphela, kwaye sijolise kubuchule ...
1. Isinxibo sentloko: Ubhekisa ikakhulu kwimihombiso esetyenzisiweyo ngeenwele neendlebe, impumlo kunye namanye amalungu. Ezona zinto zinokwahlulwa zi: (1) izixhobo zeenwele, kubandakanya iinwele, iinwele, iinwele zeenwele, izithsaba zeenwele, iinwele, imaski yeenwele, izixhwele zeenwele, njl njl.
YINTONI EKUQINISEKILEYO KUKHO?
Ubucwebe bunombala, bunxibe abantu beebala ezahlukeneyo zesikhumba, kuyakubakho iziphumo ezibonakalayo ezintle, ezintle, i-chic, inenkani, isitayile, sisiphumo sokudibana kombala kunye nobucwebecwebe. Kulusu olunombala obomvu wesikhumba, unokukhetha ubucwebe bemibalabala, obufana neebhlukhwe ezimibalabala, ...
UkuKhathalela ubucwebe bakho obuyinqaba
Ubucwebe be-1.Keep kude neendawo eziqinileyo, ukugoba kunye nokuqwengwa kuya kubangela ukuba ungqimba lweplastiki lugugule ngokukhawuleza. 2.Cima ngokuhombise ubucwebe bakho ngendwangu yomqhaphu. Kunokunceda ukuphelisa ukungcola kumphezulu kwaye kunqumle umaleko ocekeceke. 3.Gcoba ubucwebe ngepolishi yobucwebe engalunganga ...
idilesi NO.90, Chunhan South Road, Beiyuan Street, Yiwu, China